Laacibkii Inter Milan ee Joao Mario oo ka dagay magaalada Moscow ee dalka Ruushka si uu ugu biiro Kooxda… – Gool FM
Laacibkii Inter Milan ee Joao Mario oo ka dagay magaalada Moscow ee dalka Ruushka si uu ugu biiro Kooxda…
(Moskow) 27 Agoosto 2019. Joao Mario ayaa qarka u saaran inuu noqdao ciyaaryahan ka tirsan kooxda Lokomotiv Moscow saacadaha soo addan, waxaana kooxdaasi ay bixin doontaa mushaharkiisa uu ka qaato Inter Milan.
Joao Mario ayaa ka dagay Magaalada Moscow maanta oo Talaado ah, waxaana markii uu gaaray halkaasi sawir la galay taageere, kaddibna soo dhigay baraha xiriirka bulshada ee dhinaca Internet-ka.
Laacibkan khadka dhexe ayaa kooxda Lokomotiv ugu dhaqaaqaya heshiis amaah hal xilli ciyaareed ah oo ay qiyaar u ahaystaan inay kuwada iibsan karaan xiddigan 18 milyan oo euro.
Sida uu warinayso warsidaha Gazzetta dello Sport kooxda ka dhisan dalka Ruushka ayaa sidoo kale bixin doonta mushaharka laacibkaan inta ka dhiman xilli ciyaareedkan.
Ku dhawaaqista heshiiskan ayaa la rajeynayaa inay goor dambe dhacdo, iyadoo warbixinno dalkaasi Talyaaniga ka jira ay sheeganayaan in daaha laga qaadi doono heshiiskan isla caawa.
L’arrivo di #JoaoMario a Mosca (già ieri). In Russia danno per possibile la presentazione del giocatore, arrivato dall’Inter in prestito, per stasera alle 20 (russe) alla Russian Railways Arena pic.twitter.com/MF9OHMzoQp
— Daniele Mari (@marifcinter) August 27, 2019
Wakiilka Mesut Ozil oo xaqiijiyey haddii uu laacibku bisha Janaayo ka tagayo kooxdiisa Arsenal